နတ်ဆိုးကို ဘုရားသခင် အဘယ်ကြောင့် မဖျက်ဆီးသနည်း။ ▷ ➡️ အွန်လိုင်း ▷ ➡️ ရှာဖွေပါ။
နတ်ဆိုးကို ဘုရားသခင် အဘယ်ကြောင့် မဖျက်ဆီးသနည်း။
ဘုရားသခင်ကမာရ်နတ်ကိုဘာကြောင့်မဖျက်ဆီးတာလဲ။ El မာရ်နတ်သည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံရန်ဆုံးဖြတ်သောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်မရ။ သမိုင်းတစ်လျှောက် သူ၏တာဝန်မှာ ကောင်းသောနှင့် ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းမှ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားစေရန် လူသား၏ အဆိုးဆုံးဗီဇများကို နိုးထရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်း၌မကောင်းသောလက္ခဏာ el Mundo.
ခရစ်ယာန်တိုင်းသည်မာရ်နတ်၏ပုံသဏ္knowsန်ကိုသိသည်၊ သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူ၏ဖန်တီးသူနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကိုအနည်းငယ်နားလည်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ Discover.online ဒီမေးခွန်းရဲ့ယုတ္တိတန်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုငါတို့ကြိုးစားမယ်။
1 ဘုရားသခင်ကမာရ်နတ်ကိုဘာကြောင့်မဖျက်ဆီးတာလဲ။ အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။
1.1 ၁။ ဘုရားသခင်သည်စာတန်ကိုဖျက်ဆီးလျှင်သူသည်လူကိုဖျက်ဆီးရမည်
1.2 ၂။ အချိန်တန်လျှင် မာရ်နတ် ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။
1.3 ၃။ ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ပြဖို့မာရ်နတ်ကိုသုံးတယ်
ဘုရားသခင်သည် မာရ်နတ်ကို အဘယ်ကြောင့် မဖျက်ဆီးသနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကမာရ်နတ်ကိုချက်ချင်းမဖျက်ဆီးဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာသူကသူ့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးအတွက် မှန်ကန်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကွောငျ့, မကောင်းဆိုးဝါး အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်။
မာရ်နတ်သည် ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်သောအခါ၊ သူသည် ချက်ချင်း ဖျက်ဆီးခြင်း မခံခဲ့ပါ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ပြစ်မှားသောအခါတွင်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်မာရ်နတ်ကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးခဲ့လျှင်သူသည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရလိမ့်မည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဖျက်ဆီးလော့ (နှင့်အပြစ်ကျူးလွန်သူအားလုံး) လည်းချက်ချင်းပင် ဘုရားသခင်သည်သူ၏သတ္တဝါများသေဆုံးသည်ကိုမြင်ရသည်ကိုမကြိုက်ပါ။ လူတိုင်းကို ဒုတိယအခွင့်အရေး ပေးချင်သည်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ သေခြင်း သေသောသူအကြောင်း၊ အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြောင်းလဲပြီးသင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။
၂။ အချိန်တန်လျှင် မာရ်နတ် ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည်မာရ်နတ်အားအချိန်တစ်ခုအထိဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ပေးတော်မူသည် မာရ်နတ်သည် ဆုံးခန်းတိုင်ပြီ။မရ။ သူသည်ဘုရားသခင်ကိုလုံးလုံးလျားလျားငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၊ နောင်တမရစေဘဲအခြားသူများကိုအပြစ်လုပ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အချိန်တန်လျှင်ဘုရားသခင်ချမှတ်သောပြစ်ဒဏ်ကိုသင်ခံရလိမ့်မည်.
ထိုကြောင့်၊ ကောင်းကင်နှင့် သူတို့၌ကျိန်းဝပ်သော သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သားတို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် အချိန်နည်းသည်ကိုသိ၍ မာရ်နတ်သည် သင့်ထံသို့ ပြင်းစွာသောအမျက်ထွက်၍၊
ဗျာဒိတ် ၂၁: ၄
ဘုရားသခင်သည် အလွန်စိတ်ရှည်သောကြောင့် မာရ်နတ်ကို မဖျက်ဆီးသေးပါ။ မကောင်းဆိုးဝါး တရားစီရင်ရာနေ့၌ ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။နောင်တမရသော သူအပေါင်းတို့နှင့်အတူ၊ ဘုရားသခင်သည်မည်သူ့ကိုမျှမသေစေချင်သောကြောင့်ထိုနေ့မရောက်သေးပါ။ လူတိုင်းကို နောင်တရဖို့ အခွင့်အရေးရစေချင်တယ်။ စနေ အစမ်း နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးပြီးသွားပြီ။
ထိုကြောင့်၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးသားတို့၌ အမင်္ဂလာရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် အချိန်နည်းသည်ကိုသိ၍ မာရ်နတ်သည် ပြင်းစွာသောဒေါသနှင့် သင့်ထံသို့ ဆင်းလာသောကြောင့်၊
မာရ်နတ်သည်သူ၏အပြစ်ဒဏ်စီရင်မည့်နေ့မရောက်မှီမြေကြီးပေါ်တွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ လူတွေကိုဘုရားသခင်နဲ့ခွဲပြီးသူတို့ကိုအပြစ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ဒါပေမယ့်မာရ်နတ်ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဘုရားသခင်သိတယ်၊ သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကအများကြီးပိုကြီးတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြီးမြောက်ရန်မာရ်နတ်၏အမှုတော်များကိုပင်အသုံးပြုသည်။ မာရ်နတ်သည်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်များကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ပါ.
ထာဝရဘုရား၏ အကြံတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။ သူ့စိတ်ထဲ အကြံအစည်တွေ မျိုးဆက်တွေ အားလုံးကို ပေးတယ်။
မာရ်နတ်သည်လောက၌ပြဿနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းဘုရားသခင်ကသူ၏မေတ္တာသည် ပို၍ တန်ခိုးကြီးကြောင်းပြသည်။ မကောင်းဆိုးဝါး ဘုရားသခင်မရှိသောကမ္ဘာသည်မည်သို့ဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသည်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏မေတ္တာတော်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်တူသောအရာကိုဘုရားသခင်ပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် မာရ်နတ်၏အကျင့်ကို မနှစ်သက်သော်လည်း၊ သူ၏လမ်းသည် ပိုကောင်းကြောင်းပြသရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုတော်မူ၏။
ဒုစရိုက်ကို ပွါးများစေခြင်းငှါ၊ အပြစ်များများပြားသောအခါကျေးဇူးတော်သည် သာ၍ ကြွယ်ဝ၏။ အပြစ်တရားသည်သေခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူ၊ ကျေးဇူးတော်သည်လည်းအုပ်စိုးတတ်၏ တရားမျှတမှု ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဘို့
ရောမ ၁၂: ၉-၁၁
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! မင်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် မာရ်နတ်ကို ဘုရားသခင် အဘယ်ကြောင့် မဖျက်ဆီးသနည်း။မရ။ အခုမင်းသိချင်ရင် သမ္မာကျမ်းစာအရဝိညာဉ်လောကသည်မည်သို့ဖြစ်သနည်း, ဆက်လက် browsing Discover.online ။